Safaaradda Soomaaliyeed ee k/Afrika oo qabatay Shir loogu hadlaayo waxbarashada Carruurta Soomaaliyeed | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Safaaradda Soomaaliyeed ee k/Afrika oo qabatay Shir loogu hadlaayo waxbarashada Carruurta Soomaaliyeed
Safaaradda Soomaaliyeed ee k/Afrika oo qabatay Shir loogu hadlaayo waxbarashada Carruurta Soomaaliyeed
Pretoria-(SNTV)-Shirkan oo ay qabatay Safaaradda Soomaaliyeed ayaa kasoo qeyb galay Wasiiru Dowlaha Arimaha Dibadda Soomaaliya,Xildhibaano,Madaxda Safaaradda,marti sharaf isugu jiray Macalimiin ka socotay Jaamacado ay ka mid iyo Iskuullo iyo waalidiin, waxaana loogu hadlayay sidii looga gudbi lahaa Ardayda Soomaaliyeed ee ku dhaqan K/Afrikan caqabadaha kasoo wajaha Waxbarashada.
Macallimiintii iyo waalidiintii ka hadashay madasha Shirka ayaa qiray in Ardayda Soomaalida uu fahankooda aad u sarreeya balse loo baahan yahay in waalidiintu ku dadalaan sidii ay u qabsabsan laahayeen Carruurta laga keeno iyagoo yar yar Soomaaliya waxbarasha Dalkan.
Sidoo kale Shirka ayaa loogu hadlay xiriirka Soomaaliya iyo Koonfur Afrika ee ku aaddan Waxbarashada sidii loo laba jibaari lahaa iyo sidii ay Dowladda K/Afrika ay u siin lahayd Iskuul Dibadadeed.
Macallimiinta ka hadlay oo uu ka mid ahaa Prof: Dzvimpo oo wax ka dhiga Jaamacadda Vaal ee Johannsburg, ayaa sheegay in uu Soomaaliya u tagay in ay Waxbarashado dibadeed siiyaan qaar ka mid Jaamacaha Soomaaliya waxa uu rajo fiican ka muujiyay Ardayda Soomaalida ee dhigta Jaamacaha Dalkan.
Sidoo kale Osman Raage iyo Chatty oo ka mid ah macallimiinta Magaalada Pretoria ayaa iyagunu sheegay inay soo kordhayso tirada Carruurta Soomaalida ee wax ka barta iskuullada iyagoo dhanka kale sheegay in ay jiraan caqabado xagga Luuqadda ah Caruurta Soomaaliya laga keeno.
Cabdi Xalane Xirsi, oo ah u qeybsanaha Waxbarasha iyo Hiddaha Safaaradda oo qudbad ka jeediyay ayaa sheegay in baaritaan uu sameeyay uu ku ogaaday inay kordhayaan tirada Ardada Soomaaliyeed ee ku dhashay Dalka, taasi oo sabab u ah in Qoysaska Soomaalida ay kusoo badanyaan wadanka K/Afrika.
Safiirka Soomaaliya ee Koonfur Afrika,Danjire Jamal Barrow ,ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay u baahanyihiin in laga dhiso xagga Aqoonta ayna labada Dowladood sii kordhiyaan xiriirka.
“ Soomaaliya hadda uma baahno wakhtigan in Raashiin loo qeybiyo balse waxay u baahan tahay Waxbarasho tayo leh in dhallaanka hadda jira ay la qabsadaan waxbarashada Caalamka.
Xilhibaan Ludfi iyo Wasiiru Dowlaha Arimaha Dibadda,Mudane C/qaadir Axmed Kheyr, ayaa si la mid ah ugu hadlay tayeynta Waxbarashada Soomaaliya iyo Wasaaradda Waxbarashada K/Afrika iyo in Jaamacadaha Dalkaan ay waxbarashada la wadagaan kuwa Soomaaliya.
Previous articleHay’adda socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya oo Xafiisyo ka furatay Goldogob iyo Qardho
Next articleTaliyaha ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo xafiiskiisa kulan kula qaatay ku xiggeenka Safiirka Turkiga ee Soomaaliya